Diyaarad ay saarnaayeen ugu yaraan 100 qof oo rakaab ah oo burburtay
Goobta ay kusoo dhacday diyaaradda ayaa ah meel degaan ah, inkasta oo aysan caddeyn sababta soo ridday.
ISLAMABAD, Pakistan – Diyaarad rakaab ah oo ay la socdeen ugu yaraan 100 qof ayaa ku burburtay goob degaan ah oo ku taala magaalada Pakistan ka tirsan ee Karachi, sidda ay xaqiijisay Hay'adda Socdaalka dalkaas.
Abdul Sattar Khokhar, afhayeenka hay'adda oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in ay baaritaan ku bilaabeen sababta soo ridday.
Duulimaadka oo ahaa PK8303 isla markaana nooca diyaaradda uu ahaa Airbus A320 taasoo ku howlgaleysay magaca Shirkadda Duulimaadyadda Caalamiga ah ee Pakistan ayaa ka yimid magaalada Lahore.
Sawirro iyo muuqaal uu qaadey Telefishinka Qaranka ayaa muujiyey burbur soo gaarey guryo ku yaala meesha ay ku dhacday diyaaradda.
Sidoo kale, muuqaaladda ayaa muujiyey dadweyne dadka degaanka ah oo buux-dhaafiyey goobtu shilku ku dhacay oo gurmad lala gaarey.
Warar horudhac ah oo laga helay mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxay tilmaamayaan in ay geeriyoodeen dhamaan dadkii saarnaa diyaaradda.
Sanadkii 2016-kii, duulimaad ganacsi oo ay sameyneysay Shirka Duulimaadyadda Caalamiga ah ee Pakistan taaasoo ku burburtay magaaladda Chitral waxaa ku dhintay 47 ruux oo la xaqiijiyey in ay saarnaayeen diyaarada.
Pakistan ayaa sanadihii lasoo dhaafay dardargelisay qorsheyaal ay ugu diyaar-garoobeyso shilalka diyaaradaha, waxaana kamid ah agabka gurmadka deg-dega oo lagu daad-gureeyay Isbitaalada ku yaala koonfurta waddanka.
Pakistan ayaa kasoo riday India diyaarad dagaal oo gudaha dalkeeda weerar ku qaadey bishii February ee 2019.
Pakistan oo lagu eedeeyay inay taageerto Taliban
Caalamka 28.01.2018. 20:41
Madaxweynihii hore ee Pakistan Pervez Musharraf oo dil lagu xukumay
Caalamka 17.12.2019. 11:01
Trump oo ku eedeeyay Pakistan inay gabaad siiso argagixisada
Caalamka 02.01.2018. 12:42
Xaaladda Caafimaad ee Nawaz Sharif oo aad laga dayrinayo
Caalamka 29.10.2019. 16:00